Ma mudan tahay in la iibsado kaydinta dheeriga ah ee iCloud? | Wararka IPhone
Ma mudan tahay in la iibsado kaydinta dheeriga ah ee iCloud?
Miguel Hernández | | iCloud, Alaabada Apple
Iphone 6s-ka iyo iOS 9-ka cusub waxaan ka helaynaa mid kale oo ka mid ah wararka cusub ee Apple, waana taas in wiilasha ka socda Cupertino ay go'aansadeen inay si weyn hoos ugu dhigaan qiimaha qorshahooda keydinta ee iCloud, ujeedka ugu badan ayaa ah inay ka faa'iideystaan ​​dadka isticmaala Waxay doortaan 16-ka nooc ee Apple waxsoosaarka ah iyo dabcan waxay ka faa'iideysanayaan waxqabadka ugu sarreeya ee adeegyadooda barnaamijyada daruuraha sida Apple Music iyo adeegyadooda Photo Photo iCloud, shaki la'aan, 5 GB oo bilaash ah oo Apple ay siiso isticmaaleyaashu si cad ugama filna wax kale oo aan ka ahayn keydinta keydka. Kaydinta Dheeraadka ah ee iCloud bishii miyay uqalamaysaa?, In Actualidad iPhone waxaan leenahay shaki isku mid ah, waxaanan ku siineynaa gacan.
1 5GB waa mid aad u gaaban
2 Maxay Apple i siisaa?
3 Ma mudan tahay in la kireysto qorshe keyd ah?
4 Waa maxay qorshayaasha keydinta ee tartanku bixiyo?
5GB waa mid aad u gaaban
Dhammaan dadka isticmaala macruufka waxay ku helaan 5 GB kaydinta oo bilaash ah koontadooda iCloud, oo aan marka hore u adeegsan doonno inaan ku kaydinno nuqullada nuqullada qalabkeenna, laakiin taas macquul ahaan kuma filna isticmaale kasta Markaad adeegsatid adeeg ka baxsan keydyadan, tusaale ahaan, isla marka aad keydiso laba ama saddex keyd ah, waxaad ku macsalaameyn kartaa maktabadda sawirka iCloud, kaydinta degdegga ah iyo tooska ah ee Apple oo si fiican u shaqeysa.
Maxay Apple i siisaa?
Apple waxay si aad ah hoos ugu dhigtay sicirka rukunka, iyaga oo uga tagaya qiimo runti tartan ah, sidii ay yeeli jirtay maalinteedii Apple Music, Apple waxay go'aansatay inay dejiso sicirro aad u hooseeya si dadka isticmaala oo dhami ugu raaxaystaan ​​iCloud. Kuwani waa qiimaha iyo kaydinta:
50GB iCloud: 0,99 € / bishii
200GB iCloud: 2,99 € / bishii
1TB iCloud: 9,99€ / bishii
Intaa waxaa dheer, markii la yimid macruufka 9, barnaamijka 'iCloud Drive App' ayaa sidoo kale soo muuqday, kaas oo si weyn u fududeeya maareynta faylasha ku dhex jira qalabkeenna, iyadoo casharkan yar Waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo ka soo muuqaneysa SpringBoard
Ma mudan tahay in la kireysto qorshe keyd ah?
Waxay kuxirantahay, runtii haddii aad kaliya isticmaaleyso nuqulada nuqul, dabcan maahan, sababtoo ah ma jiraan isticmaaleyaal tiro yar oo haysta qorshooyinka kaydinta bilaashka ah leh awood ku filan oo ah noocyada kale ee server-yada, sida Google Drive ama Dropbox, gaar ahaan haddii aadan haysan iCloud Photo Library oo la qaabeeyey, mana jiraan aalado Apple ah oo deegaankaaga ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad si joogto ah uga mid tahay alaabada Apple, waxaad jeceshahay maktabadda sawirada ee 'iCloud Photo Library' iyo maamulka faylka oo si buuxda loo habeeyay aaladdaada, shaki la'aan in rukunka 50GB uu adiga iska leeyahay haddii aadan ku jirin jawi xirfad leh.
Hal euro bishii waxaad kaydin kartaa 50GB faylal ahIntaa waxaa sii dheer, maktabadda sawirada ee 'iCloud Photo Library' ayaa wax ka beddeli doonta cabbirka sawirrada si wax u soo gelinta iCloud ay u qaataan boos yar oo qalabkaaga ah, iyadoo aan la xusin is-dhexgal buuxa iyo is-waafajin u dhexeeya aaladaha kala duwan ee Apple. Sida isticmaalaha caadiga ah ee Apple, waxaan shaqsiyan quudin ka bixiyaa 50GB iCloud Drive ah oo lagu daray 60GB oo ah kaydinta Dropbox bilaash ah. Marka, haddii aad ubaahantahay boos, rukunka hal euro micnaheedu maahan wax khasaaro ah oo dhaqaalahaaga ah waxayna kaa yareyn doontaa madax xanuun badan.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku nuuxnuuxsanayaa haddii aadan haysan qalab buuxa oo Apple ah, iCloud Drive maahan inuu noqdo ikhtiyaarkaaga ugu horreeya, Dropbox tusaale ahaan waxaad yeelan doontaa nidaam maareyn fayl oo deg deg ah oo isku dhafan, iyo Google Drive wuxuu leeyahay Google Sawirro oo waliba si toos ah noo oggolaanaya ku maaree sawiradeena daruuraha.
Waa maxay qorshayaasha keydinta ee tartanku bixiyo?
Horta waxaan haynaa Dropbox:
Dropbox Pro 1TB: € 9,99 / bishii ama € 99,99 / sanadkii.
Dhinaca kale tartanka tooska ah, Google Drive:
100GB: € 1,99 / bishii
1TB: € 9,99 / bishii
10TB: € 99,99 / bishii
20TB: € 199,99 / bishii
30TB: € 299,99 / bishii
Iyo ugu dambeyntii OneDrive ka yimid Microsoft:
200GB: € 3,99 / bishii
1TB: € 7,00 / bishii
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Ma mudan tahay in la iibsado kaydinta dheeriga ah ee iCloud?
Keko jooniska dijo
Waxaan marwalba ku fikiri jiray inaan kuheli karo dhamaan sawiradayda iCloud si aanan ugu mashquulin booskeyga iPhone-kayga, laakiin waxaa ii soo baxday inaysan kiiska ahayn, sawiradu wali waxay kujiraan iPhone-kayga oo qaadanaya boos (waxaa loo maleynayaa inay kayartahay booska maxaa yeelay waa la hagaajiyaa, laakiin way fadhiyaan). Iyo hal shay oo aanan fahmin ... Waa maxay isticmaalka 1TB ee iCloud haddii iPhone-kaygu yahay 64Gb? Waxaan ku laabaneynaa isla wax, haddii aanan keydin karin sawiradeyda iCloud aniga oo aan ku jirin iPhone-ka, waa wax aan macquul ahayn, maxaa yeelay waligey awood uma yeelan doono in aan wax ka badan 64Gb oo sawirro ah galiyo iCloud.
Runtii ma jiraa farqi u dhexeeya cabirka u dhexeeya sawirka asalka ah iyo midka la hagaajiyay? Ujeeddadu waxay ahaan laheyd, tusaale ahaan, qofka iibsanaya 16Gb iPhone, inuu awood u yeesho inuu kaydiyo sawirada iCloud isagoon boos kahelin iPhone (si kasta oo ay ufiicanyihiin), marka hadaad kireysato qorshaha 50Gb, hayso 50Gb sawirada iyo fiidyowyada iyo «16Gb» ee barnaamijyada.
Jawaab Keko Jones
Ereygii baad afkayga ka saartay. Waxay umuuqataa in dadku aysan garwaaqsan doqonimadan iyo dufankaan fashilmay ee Apple uu leeyahay iCloud. Waxaan jeclaan lahaa isla wax, in aan iyaga soo raro iyaga oo aan ka samaynaynin meel bannaan iphone-kayga, sida Onedrive ama Google Photos ay sameeyaan. Waxaan rabaa wax 100% la mid ah labadan adeeg ee ugu dambeeyay laakiin mar hore, waxaan ula jeedaa, iOS 10.
Muxuu ku fiican yahay 1TB ee ku jira iCloud haddii iPhone-gaagu yahay 64GB? Waad ogtahay inaad u isticmaali karto isla koontadaas inaad isku waafajiso nuqulada nuqulada ah ee iphone, ipads, iTouchs iyo Apple TVs, sax? Kaliya maahan xogta multimedia sida sawirrada ama fiidiyowyada, laakiin waxyaabo badan oo badan (Settings -> iCloud). Hadaadan ogeyn, horeyba waad ogayd.
Waxa maanta la fulinayo, ama ha jeclaato ama ha ahaato, waa in la abuuro nuqullo nuqul ah oo muraayada laga dhex arko (taas oo ah, deegaanka aaladda waxaad had iyo jeer la mid noqon doontaa sida daruurta, iyo tan kale) Tan waxaa loo sameeyaa maxaa yeelay taasi waa waxa saxda ah KOOBIYADA DUGSIGA. Waxa aad soo jeedineysid waa inaad u isticmaashaa daruur ahaan 'liistada' ee aad ka heli karto mobilkaaga, taasna waxaad ku sameyn kartaa ukun app ah. Dabcan, markaad rabto inaad soo dejiso sawir waa inaad soo dejiso, ma awoodi doontid inaad ku daawato fiidiyowyo iyo sawirro 'qulqulka' daruurta.
Jawaab Luis V
Oo si aad uga tagto duuggii hore ee Megaupload oo hadda loo yaqaan Mega. Waxay ku siineysaa 50gb oo ah kaydinta bilaashka ah oo leh dhowr ikhtiyaar, mid ka mid ah ayaa soo galaya barnaamijka oo leh lambarka amniga, oo leh sawirka faraha ama faylka otomaatiga ah.
Ku jawaab david77n
Weligey maan fahmin sida loo maareeyo iCloud, kaliya waxaan ogahay inay keydinayso waxa aan ku haysto iphone-kayga laakiin wax fikrad ah kama haysto sida waxyaabo dheeri ah loogu daro ama aan u arko waxyaabaha aan ka helo internetka ee kombuyuutarka.
Ku jawaab Yo;)
Waxa kaliya ee aad ka qaban karto kombuyuutarka waa inaad ka aragto boostada koontadaada iCloud, iyo dhammaan xogta aad isku dubbariday (qoraal, xusuusin, xiriiro, ama feylal xirmo ka socota xafiiska Apple). Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa Raadi My iPhone / iPad meesha, digniinta iyo masaxa fog ee boosteejooyinka lumay.
Laakiin waxa kubad aan micno lahayn, Luis V in lagu bilaabo, haddii aad tagto iCloud.com ama aad haysato Mac leh Yosemite ama ka sareeya, ama aad ku soo dejiso iCloud kombuyuutarka, waxaad heli doontaa ikhtiyaar la yiraahdo iCloud Drive, oo aad ku wada jiidi karto dhammaan noocyada feylasha, dukumiintiyada, abuuro fayl iwm iwm si sax ah feyl gal ah oo ku furo dukumiintiyadaas dhamaan qalabka aad rabto ama ku soo dejiso kumbuyuutar kasta. Isbedelka iCloud oo leh ikhtiyaarkan iCloud Drive ayaa aniga ila muuqday. Waa inaad ogaataa kahor intaadan faallo bixin adigoon ogeyn.
Jawaab Cesar Adrian
Waa wax lagu qoslo inaad iigu jawaabto sida aad wax u sameyso oo aad ii sheegto inaan ogaado waxyaabaha ka hor inta aanad faallo bixin, markaad samaynayso isla wixii saxda ahaa. Waxaan uga jawaabayay isticmaalaha 'Me;)' shaqooyinka la helo marka la isticmaalayo iCloud.com, oo sidaad u sheegto, aysan la mid ahayn marka la isticmaalayo iCloud Drive .... laakiin taasi maahan mid aan ula jeeday, laakiin si aad uga hesho biraawsarka. Marka bal aan aragno haddii aan hagaajino fahamka aqrinta oo aan aadno kafeega, si aanan markale ugu muuqan wax lagu qoslo, 'fiican' ...
Waxay ku darayaan dijo
Luis V wax yar ayuu ogaadaa ... iCloud Drive-ku si buuxda ayuu uga waafaqsan yahay Windows PC-ka iyo biraawsarka, kuma koobna oo keliya sawirrada laakiin sidoo kale wuxuu yahay qayb kayd ah sida Dropbox.
Jaalle Cesar gabi ahaanba waa sax, haddii aadan aqoon sida wax loo sameeyo ugu yaraan ha u imaan si xariif ah oo aad ku dhaleeceynayso waxa aad iska indhatireyso.
Ku jawaab Agrecan
Mid kale oo aan ogaanin in kombuyuutarka (in PC uusan ahayn Mac, jidka agtiisa) ma wada geli kartid dhammaan xulashooyinka iCloud Drive ee biraawsarka, laakiin waxaad kaliya ka heli kartaa kuwa aan idhi. Haddii aad rabto inaad marin buuxa u hesho waa inaad soo dejiso oo aad rakibataa barnaamijka 'iCloud for Windows'.
Kaalay, wax yar ka akhri halkan ... mise sidoo kale waxaad oran doontaa in websaydhka Apple kaliya uu been sheego?
Duurjoog, raadso wax yar oo fiican, in muddo ah, iCloud waxaa laga heli karaa daaqadaha (haddii aad u fiican tahay PC) biraawsarkaaga adigoon wax rakibin, ama haddii aad doorbideysid, rakib barnaamij oo u gal sidii qaab kale oo fayl fayl ah .
Waan ku celinayaa si aad u awoodo inaad fahanto ... haddii aad isticmaasho PC leh WINDOWS iyo baarayaasheeda 'EDGE', WAAD HELI KARTAA ICLUD DRIVE iyo inta kale ee adeegyadeeda ah, sida saxda ah ee mac-da.
Waxaan kugu martiqaadayaa inaad ka soo gasho iCloud.com Windows adigoo isticmaalaya biraawsar isla markaana aad isku daydo inaad fayl garajiso Waxaad arki doontaa inaadan awoodin.
Agrecan waa sax, waa la samayn karaa in muddo ah, kahor intaysan awoodin.
Markii aan arkay in dad badani ay dhaheen waan qaldanahay, waxaan tijaabada ku sameeyay kumbuyuutarrada kale iyo daalacashada. Sidaad wada sheegteenba, nidaamka keydinta Drive-ka waxaa laga heli karaa biraawsarka. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale xaqiijinayaa in Windows XP SP2 iyo Internet Explorer, ikhtiyaarka Drive uusan u muuqan, ma garanayo sababta (waana isla sababtaas midda aan ku idhi ma shaqeyn, runtiina waan isku dayay kahor faallo). Waxaan ka cudurdaaranayaa inaan bixiyay macluumaad qaldan, laakiin sidaa uma sameeyo kuwa igu xukumay inaan beenaale ahay iyo anshax xumo markii aanan been sheegin waqti kasta.
Waan ka xumahay, laakiin miyaad ogtahay inaad kaliya ku kaydin karto hal akoon? Xisaab keliya, waxaan ka shakisanahay inaad siin doonto dhammaan wixii karaya ee ay ahayd, maaddaama xulashooyinka "Qoys ahaan", booskan qandaraaska leh lama wadaagi karo inta kale ee adeegsada qoyska.
Ku jawaab Marcos
Waxba igama gelin inaan la joogo MEGA, codsigeeda waan ka tagayaa oo waxaan soo gelinayaa sawirradayda oo dhan waxaanan haystaa 50 gigabyte.
Si dhib leh uma xiiseeyo inaan u keydiyo xogta si aan uga helo iCloud kulamadayda.
Haddana wali waxaan haystaa 2 TB-da adag iyo keyd kale laakiin heyoooo….
Abyy :) dijo
Haye hello waxaan rabaa in aan ogaado hadii 50gb ku iibsashada iCloud ay i caawineyso, waxay iiga iibsadeen iphone 8gb wixii intaa ka badan oo runti wax shaqeynaya ma jiraan si kasta ha noqotee waxaan ku ordayaa booska hadaad iiga jawaabto waxay noqon laheyd jawharad 🙂
Ujawaab Abyy :)
Ku raaxayso kuwan sawir-gacmeedka Star Wars ee iPhone-ka ah
Sida loo rakibo barnaamijyada aan rasmiga ahayn adoo adeegsanaya Xcode